स्वास्थ्य क्षेत्रको उपचार गर्ने जिम्मेवारी कस्को ? चैत्र १, २०७५
महिलाहरु किन मुटु रोगको जोखिममा ? फाल्गुन ४, २०७५
माया प्रेमको अदभूत वैज्ञानिक फाइदा फाल्गुन ३, २०७५
भान्टाः ग्याष्ट्रिकदेखि मधुमेहसम्मको औषधी भान्टामा न्यून कयालोरी हुन्छ । जसको नियमित सेवनले तौललाई सन्तुलित राख्नमा सहयोग पुग्छ । त्यसैले पनि होला यसलाई तौल न्युनीकरणको आहारको रुपमा पनि लिने गरिन्छ । पुष २९, २०७५
नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल केन्द्रिय अस्पतालमा परिणत, मेडिकल कलेजका लागी प्रयास गरिदैँ संघीय सरकारले नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई केन्द्रिय अस्पतालको रुपमा स्तरोन्ती गरेको छ । पुष १९, २०७५
नेविसंघद्वारा निःशुल्क आखाँ शिविर समपन्न नेपाल विद्यार्थी संघ पर्साले वीरगंजको ठाकुरराम बहुमुखि क्याम्पसमा निःशुल्क आखाँ शिविर समपन्न गरेको छ । मंसिर १८, २०७५
स्वास्थ्य कर्मिद्धारा नै एचआइभि संक्रमितलाई भेदभाव गरिनु अपराध हो : प्रशासकिय अधिकृत डा.भुसाल वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डा. भीष्म कुमार भूसालले स्वास्थ्यकर्मिद्वारा नै एचआइभि संक्रमित माथि भेदभाव गरिनु अपराध रहेको बताएका छन् । मंसिर १७, २०७५
परमानेन्ट आइल्यासेस एक्सटेन्सन यसरी गराईन्छ (कृत्रिम परेला राखिने काम) आँखाबाहिर त्यसमा पनि कृत्रिम नभई प्राकृतिक नै परेला राखिने हुनाले यसको कुनै साइड इफेक्ट छैन । त्यति मात्र होइन प्रयोग गर्ने ग्लु र परेला आँखामा परीक्षणपछि उत्पादित उच्च गुणस्तरको हुने भएकाले यसले कुनै बेफाइदा गर्दैन । आश्विन २८, २०७५
स्वस्थ मुटुका लागि खानुहोस् यी ७ खानेकुरा मुटुका लागि हरियो सागपात अत्यन्त उपयोगी हुन्छ । रायोको साग, तोरीको साग, मुलाको सागलगायत हरियो तरकारीले मुटुलाई स्वस्थ राख्नबाट मात्र होइन, क्यान्सरको खतराबाट पनि बचाउँछ । आश्विन २५, २०७५
पोखरीयामा निशुल्क स्वास्थय शिविर सम्पन्न स्वास्थ्य शिबिरमा पोखरीया नगरपालिका, पकाहा मैनपुर, कालिकामाई गाँउपालिका र जगरनाथपुर गाँउपालिकाका स्थानीयहरुले स्वास्थ्य चेकजाँच गराएको ओम पोलिक्लिनिक एण्ड डायग्नोष्टिक सेन्टरका प्रबन्धक निर्देशक रौनियारले जानकारी दिए । आश्विन १४, २०७५
मधुमेह बिरामीका तीन शत्रु मधुमेह भएका बिरामीमा हृदयाघात हुने सम्भावना दुई-तीन गुणा अधिक हुन्छ । यदि मधुमेह रोगीलाई उच्च रक्तचाप छ भने हृदयाघातको सम्भावना झन् बढी हुन्छ । मधुमेह र उच्च रक्तचापसँगै धूमपान पनि गरेमा यस्तो सम्भावना निकै गुणा बढी हुन्छ । यससँगै उच्च कोलेस्टेरोल पनि छ भने हृदयाघात हुने निश्चित हुन्छ... आश्विन १०, २०७५
बालबालिकाको यौन जिज्ञासा: बेवास्ता गर्नै नहुने विषय बढ्दो उमेरसँगै बालबालिकामा स्वाभाविक यौन जिज्ञासा उठ्न थाल्छ। जिज्ञासाको सही समाधान नपाउँदा बालबालिकाहरु मानिसक प्रताडना खेप्न र अपराधसम्म गर्न पुग्छन् । आश्विन ९, २०७५
थाइराइडको समयमा उपचार गरिनुपर्छ नत्र ... यो रोग नभई एक प्रकारको संक्रमण हो । चिकित्सकका अनुसार दश जना मध्ये नौ जना महिला यसको शिकार हुँदा एक जना पुरुषमा मात्रै यो संक्रमण हुन्छ । थाइराइड हाम्रो घाँटीमा हुने एउटा ग्रन्थी हो, यसलाई गलगाँड पनि भनिन्छ । आश्विन ५, २०७५
कपालमा कस्तो कलर गर्ने ? चाडपर्वको बेला चल्दैछ । यस्तो बेलामा हामीले आफ्नो अनुहारको सौन्दर्यको साथै कपाल पनि राम्रो बनाउँन चाँहन्छौ ताकि हाम्रो कपाल आकर्षक देखियोस् । आश्विन २, २०७५
के हो कलर कस्मेटिक्स ? सौन्दर्य प्रसाधन उत्पादन गर्ने अति उच्च गुणस्तरीय ब्रान्डले कतै रातो रंगको आइस्याडो उत्पादन गरेको पाइएको छैन । हाम्रो नेपाली कल्चरमा रातो रंगलाई शुभ मानिने भएकाले विवाहमा कलरफुल मेकअप नै उपयुक्त हुन्छ । भदौ २९, २०७५
यसरी गर्नुस तीजको मेकअप तीज भन्नासाथ हिजोआज एकदमै ट्रेन्डी र फेसनेबल सोच आइहाल्छ । महिलाहरू डिजाइनर पहिरनका साथ आफूलाई सुहाउने मेकअपमा सिंगारिन चाहन्छन् । तीजमा ट्रेन्डी मेकअप तर ब्राइट देखिने हल्का मेकअपमै सुन्दर देखिन सकिन्छ । हेभी मेकअपले आफूलाई मात्र होइन हेर्नेलाई समेत र्गाहो हुन्छ । भदौ २४, २०७५